Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.3.1 Netflix Loka
Ny tsara indrindra fantatra antso misokatra tetikasa dia ny Netflix loka. Netflix dia an-tserasera sarimihetsika fanofana orinasa, ary tamin'ny 2000 dia nanomboka Cinematch, ny fanompoana ny fahazoan-dalana hidirana sarimihetsika ny mpanjifa. Ohatra, mety Cinematch jereonareo fa tia Star ny ady sy ny Empire fitokonana Back ary avy eo dia fahazoan-dalana mankany ianao mijery Fiverenan'i ny Jedi. Voalohany, Cinematch zara raha niasa. Saingy, nandritra ny taona maro, Cinematch foana hanatsara ny fahaizany maminany hoe hanao ahoana sarimihetsika mety hahazo mpanjifa. Amin'ny 2006, na izany aza, ny fandrosoana eo amin'ny Cinematch plateaued. Ny mpikaroka ao amin'ny Netflix efa nanandrana tsara tarehy be ny zava-drehetra dia afaka mieritreritra ny, nefa tamin'izany andro izany, izy ireo ahiahiana fa nisy hevitra hafa izay mety manampy azy ireo hanatsara ny rafitra. Noho izany, niakatra izy nitondra izay, tamin'izany fotoana izany, nisy ifotony vahaolana: misokatra antso.
-Dehibe ho an'ireo izay ho fahombiazana ny Netflix loka dia ny fomba antso misokatra natao, ary famolavolana io dia manana lesona manan-danja ho an'ny antso misokatra ny fomba azo ampiasaina ho an'ny fiaraha-monina fikarohana. Netflix Tsy maty fotsiny ny unstructured fangatahana hevitra, izay no sary an-tsaina ny olona maro, rehefa mihevitra izy ireo aloha ny antso misokatra. Kosa, Netflix nametraka mazava olana tsotra tombana mari-pitsaràna: ireo fanamby ny olona mba hampiasa ny napetraka ny 100 tapitrisa sarimihetsika naoty mba mialoha 3 tapitrisa natao-avy naoty (naoty izay mpampiasa nataony fa Netflix tsy hanafaka). Na iza na iza afaka mamorona ny algorithm izay afaka milaza mialoha ny 3 tapitrisa natao-avy naoty 10% tsara noho Cinematch dia handresy ny 1 tapitrisa dolara. Io mazava sy mora ny mampihatra fanombanana-mampitaha fepetra mialoha naoty ho natao-avy naoty-dia midika fa ny Netflix loka dia voaforona toy izany fa vahaolana dia mora kokoa ny hijery noho ny hiteraka; dia niova ny zava-tsarotra ny fanatsarana Cinematch ho olana sahaza ho misokatra antso.
Tamin'ny volana Oktobra tamin'ny 2006, Netflix namoaka dataset misy 100 tapitrisa sarimihetsika naoty avy ny tokony ho 500.000 mpanjifa (Hodinihintsika ny fiainana manokana fiantraikany ity famoahana antontan-kevitra tao amin'ny Toko faha 6). Ny Netflix angon-drakitra azo conceptualized toy ny lehibe teraka izay eo ho eo amin'ny 500.000 mpanjifa amin'ny 20,000 sarimihetsika. Tao anatin'ny lasitra io, dia nisy tokony ho 100 tapitrisa eo ambonin'ny mizana naoty 1 ka hatramin'ny 5 kintana (Table 5.2). Ary ny zava-tsarotra dia ny mampiasa ny antontan-kevitra ao nitandrina-teraka mba milaza ny 3 tapitrisa natao-avy naoty.
Table 5.2: Schematic ny angona avy any amin'ny Netflix loka. Netflix navoaka tokony ho 100 tapitrisa naoty (1 kintana ny 5 kintana) nomen'ny 500.000 mpanjifa amin'ny 20,000 sarimihetsika. Ny tanjona ny Netflix Loka dia ny mampiasa ireo naoty mba milaza ny natao-avy naoty ny 3 tapitrisa sarimihetsika, aseho ho toy ny "?". Mialoha naoty napetraky mpandray anjara ao amin'ny Netflix Loka dia ampitahaina amin'ny natao-avy naoty. Dia hiresaka momba ny olana manodidina etika rakitra io fanafahana ao Chapter 6.
Mpikaroka sy ny mpisoloky ary manerana izao tontolo izao dia voasarika ho amin'ny zava-tsarotra, ary 2008 mahery ny olona 30.000 no miasa izany (Thompson 2008) . Nandritra ny Mazava ho azy fa ny fifaninanana, Netflix nahazo maherin'ny 40.000 avy amin'ny vahaolana natolotra mihoatra ny 5.000 ekipa (Netflix 2009) . Mazava ho azy fa, Netflix tsy nahay namaky teny sy mahalala ireo rehetra ireo vahaolana naroso. Ny zavatra rehetra nihazakazaka hampandeha tsara, na izany aza, satria ny vahaolana dia mora ny hanamarina. Netflix afaka manana solosaina fotsiny mampitaha ny mialoha naoty ny natao-avy naoty iray voalaza mialoha mimetatra (ny manokana dia mimetatra dia nampiasaina ny kianja fototry ny haratsiam-joro diso). Izany dia izany fahafahana handinika vahaolana haingana izay afaka Netflix mba hanaiky ny vahaolana avy amin'ny olona rehetra, izay nivadika ho zava-dehibe, satria hevitra tsara avy amin'ny toerana sasany mahagaga. Raha ny marina, ny mandresy vahaolana dia napetraky ny ekipa mpikaroka nanomboka tamin'ny telo izay tsy nanana traikefa, talohan'ny fanorenana sarimihetsika fanolorana rafitra (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Iray tsara tarehy ny Netflix lafiny Loka dia fa afaka ny olona rehetra amin'izao tontolo izao mba manana ny vahaolana fizahana ara-drariny. Rehefa mialoha ny olona nampakatra ny naoty, tsy mila mampakatra ny fianarana ambony Fahazoan-dalana, ny taona, ny firazanana, lahy na vavy, fironana ara-pananahana, na inona na inona momba ny tenany. Noho izany, ny nilaza mialoha naoty iray malaza Profesora avy Stanford no notsaboina mitovy toy ny avy amin'ny zatovo ao an-efi-trano. Indrisy anefa, fa tsy marina izany eo amin'ny fiaraha-monina indrindra fikarohana. Izany hoe, ho an'ny ankamaroan'ny fikarohana ara-tsosialy, ny fanombanana dia tena mandany fotoana sy amin'ny ampahany subjective. Noho izany, ny ankamaroan'ny fikarohana hevitra dia tsy ho zava-dehibe fizahana, ary rehefa ny hevitra no fizahana, dia sarotra ny hanesorana ihany ireo evaluations avy ilay Mpamorona ny hevitra. Satria vahaolana dia mora ny mijery, misokatra antso mamela ny mpikaroka mba miditra rehetra mahafinaritra ny mety vahaolana izay lavo ny alalan 'ny triatra raha heverina ihany no vahaolana avy amin'ny mpampianatra malaza.
Ohatra, amin'ny Nisy fotoana nandritra ny Netflix loka olona amin'ny efijery anarana Simon Funk dia namoaka tao amin'ny bilaoginy ny vahaolana naroso mifototra amin'ny endrika sanda lo, iray fomba amin'ny Linear alijebra izay tsy mbola nampiasaina teo aloha ny mpandray anjara hafa. Funk ny bilaogy dia niara-ara-teknika sy weirdly tsy ara-potoana. Nisy lahatsoratra bilaogy ity izay mamaritra ny vahaolana tsara sa ho fandaniam-potoana? Eo ivelan'ny antso misokatra tetikasa, ny vahaolana mety tsy nahazo tombana lehibe. Araka izay rehetra Simon Funk dia tsy ho mpampianatra ao amin'ny Cal Tech na MIT; izy dia rindrambaiko developer izay, amin'ny fotoana, dia backpacking manodidina Nouvelle-Zélande (Piatetsky 2007) . Nanoratra e-mail raha tsy ary izany hevitra ho injeniera ao amin'ny Netflix, dia efa azo antoka fa tsy efa noraisina ho zava-dehibe.
Soa ihany, satria ny fanombanana fepetra dia mazava sy mora ny mampihatra, ny mialoha naoty ireo fizahana, ary efa hatrany mazava fa ny fomba tena mahery Izy rocketed ny fahefatra toerana ao amin'ny fifaninanana, ho be vokatra nomena fa hafa ekipa efa nisy miasa nandritra ny volana maro ny olana. Amin 'ny farany, faritra Simon ny fomba Funk dia ampiasain'ny saika lehibe rehetra mpifaninana (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Ny zava-misy fa Simon Funk nisafidy ny hanoratra lahatsoratra bilaogy manazava ny fomba, fa tsy miezaka ny hitandrina izany miafina, mampiseho ihany koa fa maro ny mpandray anjara ao amin'ny Netflix Loka ihany dia tsy atosiky ny ny tapitrisa dolara loka. Kosa, maro ihany koa ny mpandray anjara toa nankafy ny fanamby ara-tsaina sy ny fiaraha-monina izay niroborobo nanerana ny olana (Thompson 2008) , fihetseham-po izay manantena mpikaroka maro afaka mahatakatra.
Ny Netflix Loka dia mahazatra ohatra ny antso misokatra. Netflix Nametraka fanontaniana tamin'ny tanjona manokana (mialoha sarimihetsika ratings) ka mangataka vahaolana avy amin'ny olona maro. Netflix dia afaka mamantatra ireo vahaolana rehetra, satria mora kokoa izy ireo mba hanamarina toy izay mamorona, ary farany Netflix naka ny vahaolana tsara indrindra. Manaraka, aho hampiseho aminao ny fomba fomba io dia azo ampiasaina amin'ny biolojia sy ny lalàna.